मिति : २०७४ माघ ४, बुधवार
फिल्मीखबर, काठमाण्डौ, 2018/01/10
यही शुक्रवारबाट नेपाल अधिराज्यभर प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘मिस्टर झोले’ अब हङकङमा पनि प्रदर्शन हुने भएको छ । आउँदो आइतवार अर्थात्, जनवरी १४ तारिखमा फिल्मको हङकङमा प्रदर्शन हुनेछ ।
मृगौला पीडित दिलुमाया गुरुङको सहयोगार्थ हुने शोमा नेपालबाट कलाकार दयाहाङ राई, दीया पुन र निर्देशक रामबाबु गुरुङ उपस्थित हुनेछन् । ‘गुर्खा सेमेटेरिज ट्रस्ट’को प्रस्तुतीमा देव, जीवन, अरुण र टोपराजले शो आयोजना गर्न लागेका हुन् ।
२०७० सालमा निर्माण भएको निर्देशक दीपेन्द्र के. खनाल निर्देशित तथा टेकेन खड्काको निर्माणमा बनेको फिल्म 'झोले' टाईटल ब्रान्डलाई प्रयोग गरि टेकेन खड्का प्रोडक्सन र सिनेमा आर्टले संयुक्त रुपमा ‘मिस्टर झोले’ निर्माण गरेको हो ।
रौनक बिक्रम कँडेल कार्यकारी निर्माता रहेको यो फिल्मलाई शैलेन्द्र डी. कार्कीले छायांकन गरेका हुन् । 'कबड्डी', 'कबड्डी कबड्डी', 'पुरानो डुंगा' फिल्मका निर्देशक रामबाबु गुरुङ निर्देशित यो फिल्ममा दयाहाङ राई, वर्षा राउत, दीया पुन, प्रविण खतिवडा, वृद्धि तामाङलगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।
यसकारण चल्नैपर्छ निखिललाई ‘पिंजडा ब्याक अगेन’ !
‘लिलिबिली’ गीत युट्युब ट्रेन्डिङको शिर्ष स्थानमा
‘पद्मावत’मा दीपिकाको पारिश्रमिक ११ करोड
मरिष्का कसकी ‘साली’ ?
‘मिस्टर भर्जिन’मा छुल्ठिमको आइटम डान्स
हलिउड फिल्मबाट ‘शेरबहादुर’ प्रभावित
६ लाख मागेकै छैन : दीपिका प्रसाईँ
चैत १६ मा पुग्यो ‘ह्याप्पी डेज’
सलमान आफैंले तोडे ‘बजरंगी भाईजान’को रेकर्ड
कम उमेरको हिरोसँग रोमान्स गर्दा पहाड बग्छ ? : प्रियंका कार्की
बडिगार्ड लिएर हिँड्दैमा ‘स्टार’ भइन्छ ?
केकी र नाजिर : फेरि ‘हातमा लाग्यो शून्य’
निर्मातासँग प्रियंकाले मागिन् ११ करोड !
‘कृ’को गीत युट्युब ट्रेन्डिङको शिर्ष स्थानमा